Otú nyefee Video, Ndi ana-akpo, Photos na Music si iPod ka Android
Otú nyefee Video, Ndi ana-akpo, Photos, Kalinda, iMessages na Music si iPod
1 Nyefee gaa na iPhone
1.1 Samsung ka iPhone
1.2 Sony ka iPhone
1.3 Android ka iPhone
1.4 iPad ka iPhone
1.5 Mac ka iPhone
1.6 HTC ka iPhone
1.7 iPhone ka iPhone
1.8 iTunes ka iPhone
2 Nyefee gaa na Android
2.1 Android ka Android
2.2 Blackberry ka Android
Ma gụọ 2.3 iTunes ka Android
2.4 Nokia ka Android
2.5 iPhone ka Android
2.6 iPod ka Android
2.7 iCloud ka Android
2.8 Blackberry ka Samsung
Otú nyefee Video, Ndi ana-akpo, Photos, Kalinda, iMessages na Music si iPod ka Android
Ụzọ dị mfe iji nyefee faịlụ n'etiti ngwaọrụ na otutu nyiwe, iPod ka Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, bụ inwe a ọzọ ngwá ọrụ. Na ya, ị nwee Ka idoro na dobe iPod faịlụ, dị ka music, videos, photos, gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba bú ala. Ị na-eche dị otú ụdị ọzọ ngwá ọrụ? N'ezie. E nwere eme na-a ziri ezi onye - na Wondershare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac. The akụkụ bellow ga-a keukwu ịme banyere otú iji nke atọ ọzọ ngwá ọrụ nyefee faịlụ site na iPod ka Android ngwaọrụ.
Otu Pịa Nyefee iPod ka Android
Erughị 10 mins, All A Na-eme!
Na Wondershare MobileTrans, na ị na-enwe ike nyefee music, video, foto na kọntaktị site na iPod ka Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba mfe.
Zero Ogo Loss & Egwu-free
2,000+ ekwentị mkpanaaka na
Nyefee na tọghata songs, iTunes U, Movies, Pọdkastị, TV Kụziiri si iPod aka ka Android ngwaọrụ
Detuo kọntaktị niile echekwara na iPod na ígwé ojii gụnyere Google, iCloud, Yahoo! na ndị ọzọ na-Android ngwaọrụ
Paghaa kalenda, na iMessages si iPod ka Android ekwentị
Dakọtara na iPod aka 5/4/3 na-agba ọsọ iOS 9/8/7/6/5, HTC, Samsung, LG, Sony na ndị ọzọ Android ngwaọrụ.
Gaa Wondershare MobileTrans maka Mac Mgbe unu na-Mac kọmputa.
Ntak emi Họrọ Wondershare MobileTrans
Ọ dịghị mgbagwoju nzọụkwụ. Nanị otu click, niile data on iPod ga-agafere.
Ọ bụghị naanị Nyefee Music
Ọ na-enye gị ike nyefee niile audio, video, photos, kọntaktsị, kalinda na iMessages si iPod ka Android ngwaọrụ.
Nkwado nza nke Android ngwaọrụ
Ọtụtụ gam akporo ngwaọrụ, dị ka Samsung, Motorola, LG, HTC, Sony na ndị ọzọ, na-n'ụzọ zuru ezu na-akwado.
Na-akwado ọtụtụ ekwentị Carriers
N'agbanyeghị ma na ị nwere nkwekọrịta na Sprint, AT & T, T-Mobile na Verizon, ọ na-enyere ị gụsịa iPod ka Android transfer naanị.
Achọrọ m nyefee si:
Site Android 2.1 ka Android 4.4
iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 & iOS 9
Symbian 40 & Symbian 60 & Symbian ^ 3 (Nokia)
Site Android 2.1 ka Android 6.0
iOS 5, iOS 6, iOS 7 & iOS 8
Ị nwere ike iji:
iPod ka Android transfer apụghị ịbụ mfe. Mụta nkọwa n'okpuru >>
The Mac version anaghị akwado Nokia (Symbian) ekwentị.
Nyefee Music, Video, Photos, iMessages, Kalinda & Ndi ana-akpo si iPod ka Android
Iji nyefee iPod aka kọntaktị na Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, ị nwere ike banye gị akaụntụ, dị ka iCloud, Google, Hotmail, wdg Mgbe ahụ, Wondershare MobileTrans ga-nyefee kọntaktsị na ihe ndekọ ndị na-Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba.
Nzọụkwụ 1. Gbaa ndị Mmemme
Wụnye na-agba ọsọ ahụ Wondershare MobileTrans on Windows kọmputa. Iji mee ka iPod ka Android transfer, i kwesịrị pịa Malite ịbanye ekwentị transfer window.
Cheta na: Wụnye iTunes on Windows kọmputa iji jide n'aka na ngwá ọrụ a na-arụ ọrụ ọma.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPod na gam akporo ngwaọrụ-agba ọsọ ahụ Mmemme
Plọg n'ime USB cables iji nweta ma gị iPod na gam akporo ngwaọrụ njikọ. Mgbe ahụ, ma ngwaọrụ egosi elu na MobileTrans window.
Nzọụkwụ 3. Malite nyefee iPod ka Android
Iṅomi akwado faịlụ iji hụ ihe ị na-aga nyefee. Mgbe ị hụ ihe ga-agafere, pịa Malite Copy. Ọ na-ewetara elu a dialog, site na nke ị nwere ike ịlele pasent nke ọganihu mmanya. Mgbe iPhone ka Android transfer zuru ezu, pịa OK.
Nyefee faịlụ site iPod ka iPod
Copy faịlụ site Nokia ka Android
Bugharịa faịlụ site iPad ka Android
Nyefee Music si iPod ka iPad
Ịgbanwee Data si iPod na ekwentị
Bugharịa Files si gam akporo ka Android
Copy Data si Nokia ka Samsung
Ịgbanwee Data si iPhone ka iPhone
Ịgbanwee Data si iPhone ka Android
Bugharịa Files si gam akporo ka iPhone
Copy Data si Blackberry ka Android
Gịnị Dị Iche Android si iPhone
Otú nyefee Ndi ana-akpo si Blackberry ka Samsung S4 / S3 / Cheta 3 / Cheta 2
Nyefee na Ndi ana-akpo, Video, Photos, Kalinda, iMessage na Music si iPod ka HTC
Mfe Import / Export Ndi ana-akpo gaa na site na ekwentị mkpanaaka na Android
Nyefee Music si iPod aka ka iTunes na ala
Nyefee Music si iPod ka New Computer Mfe
Olee otú mmekọrịta iPod ka New Computer
Hichapụ Songs si iPhone / iPad / iPod ịkpọgharịa
Otú nyefee MP3 ka iPod na ma ọ bụ na-enweghị iTunes
Nyefee Music si iPod ka mpụga ike mbanye
2 Ụzọ Ekekọrịta iPod music
iPod aka Notes Weghachi: Olee otú iji weghachi Notes on iPod aka 4
iPod emetụ ndabere extractor: Wepụ Backups nke iPod aka 5/4
Olee otú Hichapụ Songs si iPod kpochapụwo
> Resource> iPod> otú nyefee Video, Ndi ana-akpo, Photos, Kalinda, iMessages na Music si iPod